डाक्टर साप तपाई यहाँ ड्राईभर ?
इसु के. सी
समय पनि अचम्म हुदो रैछ । खै कताबाट शुरु गरुँ कसरी पोखुँ मनका पीडा ? यो मनमा कालो बादल मडारी राखेको छ घरि घरि मुटु फुट्ला जस्तो भएको छ, म सम्झन लाएक छैन, ती पलहरु ती दिनहरु यो पापी समयले मलाई रुन सिकायो हाँस्न सिकायो । को आफ्नो को पराई चिन्न सिकायो, गर्नु धेरै छ त्यसैले त जिन्दगी संघर्ष भनिएको होला । नांगै आयौ र नांगै जानेछौ तर पनि किन मनमा केही गर्नु पर्छ समाज परिबर्तन गराउनु पर्छ भने कर्तब्य बोधको महशुस भएको छ । तर संसार स्वार्थी छ मानिस जीबन पैसासंग तुलना गर्छ । हो हामी पैसालाई नै जीबन मान्छौ, कदापी पैसालाई जीबन मान्ने छैन भनी मैले कुनै बेला संकल्प गरेको थिएँ तर समयले मलाई हार्न सिकाएको छ तैपनि मैले हरेस चाहिं खाएको छैन ।
प्रसंग बदलौं, शिक्षित परिवारमा जन्म लिएको म साधारण बिद्यालयबाट फलामे ढोका पहिलो श्रेणीमा पास भएको थिएँ । त्यो बेलामा साधारण बिद्यालयबाट उच्च नम्बर ल्याउनु भनेको चानचुने कुरो थिएन । सानोमा अति बिमारी भएर हस्पिटल बस्दा मलाई डाक्टरको पेशा नजिकबाट अबलोकन गर्ने अवसर पनि मिलेको भएकोले मलाई डाक्टर बन्ने र सेवा गर्ने मेरो समना बास्तबिकमा उतार्ने समय भएको थियो । जब म क्याम्पसको खोजी गर्दैगर्दा नै मैले डाक्टर बन्न नसक्ने सोची सकेको थिएँ । पोखरा मणिपालमा डाक्टर बन्न त्यस्तै ३० लाख रुपैया भन्दा बढी लाग्ने थाहा पाएँ । एक साधारण परिवारको मान्छेको लागि डाक्टर पढ्न सक्ने कुरै भएन तैपनि आशा चाहिं मारेको थिएन । त्यस्तैमा एक दिन एउटा साथीको दाइले नयाँ आइडिया दिनु भयो । CMA/HA पढेको मान्छे डाक्टर सस्तोमा पढ्न पाउँछ भनेर । अनि मैले सी.एम.ए. पढ्ने निधो गरें । सोही मुताबिक मैले १५ महिनाको कोर्स सकेको मात्र के थिएँ हाम्रो देशको नालायक सरकार नियम परिबर्तन गरेर सी.एम.ए ले डाक्टर पढ्न नपाउने बनाएछ, यति मेहनत गरेर पढेको थिएँ कि म आफ्नो नाम त्यस ग्रुपको प्रथम स्थानमा नाम समेत निकाल्न सफल भएको थिएँ । त्यो निर्णयले मलाई अत्यन्तै दुःखी बनायो । मेरो लक्ष्यमा तुसारापात ल्यायो । र मन केही सम्हालेर एच.ए. पढ्ने निधो गरें र ३ बर्षे एच, ए मा लागें । पहिलो र दोस्रो बर्ष राम्रै भयो त्यस बेलासम्म मैले धेरै गाउँमा गएर सेवा गरिसकेको थिए भने दमौली जिल्ला हस्पिटलमा ९ महिना ट्रेनिंङ पनि दिएको थिएँ । दमौली गएको ७-८ औ महिनासम्ममा मैले त्यहाँ राम्रो काम गर्ने भनेर नाम कमाएको थिएँ ।
एक दिन बेलुका ६ बजे म हस्पिटल मै थिएँ । त्यसै बेला अचानक एम्बुलेन्सको आवाज आयो बिमारीको टाउकोबाट धेरै रगत बगी राखेको थियो । संयोग त्यो दिन हस्पिटलमा डाक्टर हुनु हुन्थेन नर्सको जिम्मामा थियो । हस्पिटलमा उही नर्स पनि प्रसुती वार्डको, अब त्यो बिमारीको उपचार गर्ने जिम्मा मेरै टाउकोमा आयो र तुरुन्त नर्सको सहयोगमा बिमारीलाई life saving drugs चलाएर dressing ward मा लगें । बिमारी त्यस्तै २० वर्षको केटो थियो । अचेत अवस्थामा राम्रो संग मैले आफैले उसको घाउ सफा गरेर suture गरें । रगत बग्न रोकिए पछि बिमारी मोटर साइकलमा दुर्घटना भएको थाहा पाएँ । जब बिमारीको उपचारको काम सकियो बाहिर प्रहरी आएर “यो पुलिस केस हो किन खबर नगरीकन उपचार गरेको” भन्छ, उता हस्पिटलको जिम्मा लिएको डाक्टर फोन गरेर “किन खबर नगरेको” भन्छ । होइन बिमारी ५ मिनेटमा उपचार नभए मर्न सक्छ त्यति बेला उपचार गर्नु कि खबर गर्नु ? मेरो उत्तर यही रह्यो । यत्तिकैमा बिमारीको होस् आयो केही पीडा कम भएको महशुस गरे उनले । जब बिमारी होसमा आएको थियो सब भन्दा पहिला मलाई हेरेर “डाक्टर साप कस्तो छ” भनेको थियो । मैले सक्दो मेहनत गरें उसको जीवन बचाउन । यो कुरा उसको आफन्तलाई राम्रोसंग थाहा छ । १-२ दिनमा बिमारी राम्रो बोल्न सक्ने भयो, उनको नाम रमेश थापा मगर रहेछ । नजिकै क्याम्पसमा पढाई गर्दै रहेछ उसले मलाई जति बेला नि डाक्टर साप भनेर बोलाउंथ्यो मलाई डाक्टर भनेर बोलाउंदा मनमा एक किसिमको खुशी लाग्थ्यो । करिब २० दिन उसको दिन रात नभनी उपचारमा लागें । हुन त अरु बिमारीहरु नि हस्पिटलमा मेरै नाम लिएर खोज्दथ्यो । मैले बिमारीलाई सरल शब्दमा काउन्सिल गर्ने भएको ले नि होला ।
रमेशको हस्पिटल बसाई अन्तिम दिन थियो । उनको अवस्था लगभग ठीक भैसकेको थियो । तर उसलाई रेस्टको आवश्यक मात्र थियो । छुटिने समयसम्म नि डाक्टर साप मलाई नभुल्नु ल भनेर मेरो इमेल id मागेर लगेको थियो । म पनि भोलि त पोखरा फर्कनु पर्नेथ्यो । त्यो रमेशको राम्रो उपचार गरेको मा मलाई सम्मान पनि गरियो । यो खबर यता क्याम्पसमा सरलाई जानकारी भएको रहेछ । क्याम्पस मा नि मलाई राम्रो काम गरेकोमा स्याबास दिनु भयो । उता रमेशसंग म्यासेज आदानप्रदान भै नै रहेको थियो । उसले मलाई संधै डाक्टर साप भनेर लेख्थ्यो र साँचिकै डाक्टर पढोस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
यच. ए तेश्रो वर्षको परिक्षा सुरु भएको थियो । नेपालमा राजनीति बिग्रेर कहिले बन्द हुन्छ थाहा थिएन । परिक्षाको अन्तिम दिन थियो, घरबाट परिक्षा दिन निस्केको थिएँ बगरमा आएपछि बन्द छ गाडी अघि जान्न भन्ने सुनें । पुग्नु पर्ने अम्बर शिंहचोक थियो घडीमा ६;३० भएको थियो ७ बजेबाट परिक्षा सुरु हुन्छ, हिडेर नै पुग्नु पर्ने भयो बन्दको बाटो छिचोलेर केन्द्र पुग्दा ७;३० भयको थियो । ढिलो आएको ले परिक्षा दिन नपाइने भनियो मैले धेरै बिन्ति गरें तर हलमा जान पाएन । म घर आएर कति रोएँ बन्द गर्नेलाई गाली गरें । तर मेरो लक्ष्य डामाडोल हुने बिचार गरें उता रमेशको डाक्टर साप शब्द अब मलाई घाँडो लाग्न थालेको थियो । मैले उसको म्यासेजको उत्तर दिन छाडें । मेरो डाक्टर बन्ने इच्छा तुहियो । मलाई नेपालमा जन्मेकोमा धिक्कार लाग्यो । नेपालमा बस्न मन लागेन र केही पढ्ने बाहानामा सिंगापूर तिर हानिएँ । सिंगापूर ६ महिना बसाईमा केही प्रगति नदेखे पछि फेरी नेपाल फर्के । त्यसबेला नेपालमा कोरिया जाने भाषा कक्षाहरु भर्खरै सुरु भएका थिए । म नि कोरिया जाने सपना बुने र परिक्षा दिएर पास भई कोरिया आएँ ।
रमेशसंग मेरो म्यासेज नभएको नि ३ वर्ष भएको थियो । हिजो हस्पिटलमा हड्डी जोड्ने यी हातहरु आज कोरियामा फलाम जोडिरहेकोछु । नेपालमा कानमा stethoscope लगाउने म आज कोरिया मा इअर प्लग लगाई राखेको छु । सेतो एप्रोनको सट्टा कम्पनीको बाक्लो कपडा लगाएको छु । नेपालमा बिमारीलाई blood दिनु पर्ने म कोरियामा machine मा तेल हालेर बसेको छु । यो मेरो बाध्यता हो । त्यति मात्र हो र यहाँ कम्पनीको गाडी (chikisa) पनि चलाउछु । यसरी नै ३ बर्ष बिति सकेछ । कहिले पालि पाली त कहिले सेक्या सिबाल मेरो लागि सामान्य भएको छ । तर मैले कसैलाई नि नेपालमा मैले यस्तो उस्तो पढेको भनेको छैन । म जस्ता धेरै देशका दक्ष साथीहरु कोरियामा अदक्ष भएर काम गरिरहेका छन् ।
एकदिन कम्पनीको गाडी (chikisha) ले सामान लोड गर्दैथ्यो । १ जना २३-२४ वर्ष को केटो म तिरै आउदैथ्यो म काममा ब्यस्त थिएँ । उसले मलाई नेपाली हो भनेर सोध्यो हो म नेपाली हुँ जवाफ दिएँ । मैले टोपी मास्क लगाएको थिएँ । त्यो खोलेको मात्र के थिएँ उताबाट त्यो केटाले भनि हाल्यो "डाक्टर साप तपाई यहाँ ड्राईभर ?" म त्यो डाक्टर साप शब्दले झसङ्ग भएँ तर मैले उसलाई चिन्न सकिन उसले आफ्नो परिचय दियो । मा उही रमेश के दमौलीको मात्र के भनेको थियो । मैले सम्झी हालें । पहिले भन्दा धेरै फरक भएछ मैले चिन्न नै गाह्रो भयो । उ कोरिया आएको नि बल्ल ५ महिना भएछ काम गाह्रो भयर कम्पनी छाडेको अरे । नेपालमा डिग्री पढें तर जागिर नपाएर कोरिया आएको साह्रै गाह्रो रहेछ । त्यो त मैले भोगिसकेको छु । म चुप लागें उसले मेरो कम्पनीमा काम गाह्रो भनेर गयो । यता मलाइ कोरियनले पालिपाली भानिसकेको थियो । म पनि काममा लागें । रमेश मेरो फोन नम्बर लिएर बाहिरियो ।
अहिले रमेश छनानको एक कम्पनीमा काम गर्दैछ कहिलेकाही कुरा गर्छु । सुरुमा उसले डाक्टर साप नै भनेर बोलाउंछ । एक मनले उसलाई यहाँ संगै पाएर खुशी छु त अर्को मनले खिन्न छु । उसले अझैसम्म डाक्टर साप भनेर बोलाउने गर् । जब मलाई उसको शब्द सम्झन्छु एक मिनेट कोरिया बस्न नचाहने मन उत्पन्न हुन्छ तर बाध्यता छ । अब धेरै समय छैन अलिअलि कमाएको पैसा र यहाँको सीप अनि यहाँको कठोर मेहनत गर्ने तरिका आफ्नै देशमा गएर लगाउनेछु । देशमा संबिधानको दोस्रो चुनाब सकिएको छ । राम्रो संबिधान बनोस् देशमा सान्ति सुरक्षा कायम होस् । हाम्रो देश नेपाल नि कोरिया जस्तै बनाउने सपना देखेको छु । हामी सबैजनाले आफ्नै देश आफ्नै माटोमा बसेर कम गर्ने बातावरण बनोस्, मैले जस्तो बीच मै पढाई अबको सन्ततिले छाड्न नपरोस हामी सबैले कामना गरौ धन्यवाद ।
नोटः यो घटना मेरो वास्तविक जिबनमा घटेको घटना हो । यस किसिमका बिभिन्न घटनाहरु तपाईको जिवनमा पनि घटेका होलान् तपाईहरु पनि आफ्नो लक्ष्य दबाएर कोरियामा श्रम गरिरहेको होला । आशा गरौं हामीले त आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकेनौं अब हाम्रा भावी सन्ततिलाई यस्तो नहोस् ।